Ioli yokuqala yintombi yam - i-Geofumadas
Iintombi zokuqala zeoli
Ndibuya Emva kweminyaka emithathu ye-geofumadas, ndagqiba isigqibo sokuthatha ikhefu endiyifunayo. Ndinexesha lokwenza uhambo oluninzi alusebenziyo, libone ilizwe elithulileyo, kwaye wenze ubugcisa obuthile obuya kuhlaziya.
Ndaya emva ukupeyinta, kodwa eli xesha ioli, ufuna ukudlala acrylic kwakunye pasta texture. Ukuze abantwana bam musa kunditshabalalisa mna, bakunduluka, sathenga Cambas a ngoM elincinane, iioyile kunye turpentine kukungcamla den ne art ukuba sele unayo.
Apha ndikubonise iziphumo zentombi yam eneminyaka engama-8 ubudala, owayengenakudliwa yi-watercolor kunye ne-tempera.
Iimbetho zakhe zokuqala. Ukuhlangana kwakho kokuqala ngokudibanisa amabini amabini ngokutsha kwaye ungayazi into oyenzayo.
Apha ukwenza iimxube zabo kunye ne-spatula. Kuthatha ixesha elithile ukuba athole imibala ngaphandle kwebhubhu ngaphandle kokubanjwa.
Kuya kuphinda kwakhona, ukusuka phezulu ukuya ngasezantsi, nge-brush 12. Iimpawu ze-synthetic kodwa zihamba ngokungathi zizinwele zekamela.
Ekugqibeleni wagqiba kunye nemilenze yakhe yecwecwe kunye nephunga le-turpentine lashiya isilonda esifubeni sakhe kwisifuba sakhe. Kodwa luthando. Ndamnika ingilazi yobisi ekunciphiseni ubuthi kunye nosuku olulandelayo apho ndikulungele.
Wahlala phantsi ukwenza izicatshulwa ezimbalwa, ngaphandle kokuthatha isigqibo sokuba ndixelise isitayela saseCubist esilula okanye amanani akhe abantwana.
Ne yokuqala bafunda izinto ezininzi ukuba andiyi ukufundisa ngexesha lokuqala: Kwathi primer kunye ithinasi ukuthintela ukuba ngokuhlaziya owomileyo, ukulawula imida phakathi ngezandi tyaba, ukuba ukushiya izithuba ungenanto, akukho usebenzisa ibrashi owomileyo kakhulu kunye nombala engazange wafaka ngethoni ngqo uzayo tubo.Y Unyana wam bakhalaza ukuba Netherlands akazange enze nto ekupheleni ... wabhuqa yesibini.
Ekugqibeleni wagqiba emva kwemizuzu ye-44, enepende kwizitama zakhe nezandla zakhe. Unomnqweno kunye nefang.
Siza kubona ukuba ixesha elide ndihamba ngalo lini.
Ngoku siza kunye nendodana yam, othe mncinane kakhulu wazama ngeoli kwi-toilevas ngaphandle kwe-primer.
Akungabazeki ukuba akuyona indlela yakhe yokuqala, kodwa ukuba ndibone zihlandlo zobuqili Ngaloo mibonakaliso sele uyazi ubuchule. Kungakumbi ukuba ube mnandi kum kunokuba naye, kodwa ngaloo ndlela uya kuhlakulela isitayela sakhe.
Post edlulileyo«Edlulileyo I-VBA Microstation: Yenza imephu edibeneyo
Post Next Iingxaki eziphambili ze-Acer Aspire OneOkulandelayo "
Enye impendulo "Intombazana yam yokuqala yeoli"
Kulungile ukuba unikezele ngelo xesha kuye kwaye umfundise into enokuba lula njengokuthi "ukusebenzisa ubuchule ngeendlela ezithile." Ndinqwenela bonke abantwana babenazo iitapile ezibafundisa ukuba bazibeka esichengeni kwezi "zinto zilula" kwaye banikezele ngelo xesha kubo kangangokuba ekupheleni kweminyaka kubaluleke kakhulu ...
Uyabanga kwaye ndivuyayo ukuba ubuyile kwaye uphumle!